Naphezu ukuthuthukiswa ngokushesha abekho embonini yokwenziwa kwemithi abantu, ngeshwa, bengayeki ogulayo, futhi imithi emisha abakwazi lula isifo esithile njalo. Kuyinto ezimweni ezinjalo, abaningi sebeqala khumbula imithi ngendlela engenabulungisa ukhohlwe ukuthi isikhathi ihlolwe, ngaphezu kwalokho, kufanele aphansi uma eqhathaniswa analogs zabo zakwamanye amazwe. Omunye izidakamizwa ezifana sodium thiosulfate. Uhlanza umzimba nalo kungenziwa kuphela kuqhathaniswa namanzi "yokuhlanza dry" wangempela, emva umthelela, okuyinto ungakwazi ushiye ngenombolo izifo kanye lula kakhulu ukugeleza yabo.
Ngaphambi ukusetshenziswa, uthintane udokotela.
Zinhlayiya babe ayinaphunga futhi esobala elimbudumbudu kungekho nto enemibala emihle brackish ukunambitheka ababayo kalula oncibilikayo emanzini, kodwa zingaxazululeki ngokuphelele utshwala - lena kwakwakhe ikhemikhali okuthiwa i-sodium thiosulfate.
imithi Ikhemisi 30% - s umjovo ka ibhokisi lomyalezo esetshenziswa kuyindlela yokuvimbela ubuthi by esindayo, ingasetshenziswa ngempumelelo wedwa ekhaya ngoba ukuhlanza umzimba, ngaphambili buhlanjululwe ngamanzi. Abantu abaningi, ngemva kokufunda isihloko ephephabhukwini "Chemistry Nokuphila" iminyaka engaphezu kwamashumi amabili adlule, ulondoloze impilo yabo ngosizo we thiosulfate izidakamizwa sodium.
Ukuhlanzwa komzimba ngenxa isenzo ejenti enamandla kakhulu ekunciphiseni - okungukuthi sulphur molecule, ahlangana izinsimbi ezisindayo kanye ubuthi. Ngaphansi kwethonya ikhambi kwandisa peristalsis, okuqukethwe liquefies kanye nokwenyuka kwezinga ivolumu, kanjalo usheshisa ukubuyiselwa imisebenzi kahle yezitho zangaphakathi kanye ngokukhishwa kobuthi egazini zomzimba. Njengoba sihambisana nale ukulethwa ilibele of ezinobuthi lwalo emfudlaneni igazi ngokusebenzisa le mucosa emathunjini ngenxa yokukhula kancane inqubo ukumuncwa.
Sodium thiosulfate. elihlanza umzimba
Inkambo uhlanzekile Kwenziwa ezinsukwini ezingu-10 (ngezinye izikhathi 12). Alulaze kuye ukubekezelelana umzimba isisindo 10 kuya ku-20 ml isixazululo 30% ingxenye ingilazi yamanzi aphuze ebusuku, amahora amabili ngemuva kokudla. Ukunambitheka isiphuzo kubuhlungu. Ncoma isidlo Potion nocezu ezisawolintshi, nakuba abanye abantu bakhetha ukuphuza amanzi, khona-ke, njengoba besho ukunambitheka nombala ... unquma. Kuyaphawuleka isimo umzimba enemas elihlanza ngaphambi nangesikhathi nokushintsha kokudla nokufakwa sodium thiosulfate. Ukuhlanzwa kwenzeka ngokushesha - sodium thiosulfate ukusheshisa excretion ubuthi kusukela amathumbu.
Kubalulekile futhi ukuba Ukudla ngesikhathi Hlanzani, ngaphandle ukusetshenziswa inyama nemikhiqizo yalo begodu kukhula baphuza uketshezi, ikakhulukazi ayo asanda walungisa zezithelo ezisawolintshi. Kunconywa ukusetshenziswa ngesikhathi esisodwa ingxube yompe, orange kanye ubhamubhamu ayo. Futhi kumele buhlanjululwe ngamanzi esikhungweni isilinganiso 1: 1. Citrus juice, ngokuba ngempela amagugu afihlekile Antioxidants namavithamini, ngaphandle i izitsha wezindlu kakhulu.
Sodium thiosulfate. isibindi ukuhlanzwa
Ukuhlanza "chemical laboratory" zomzimba - kwesibindi, kubalulekile omunye isitsha ukuncibilikisa izidakamizwa emanzini ekamelweni lokushisa in inani nendebe nesiphuzo:
isigamu sehora ngaphambi ukudla ekuseni - isigamu inkomishi;
ngaphambi kokulala kusihlwa - engxenyeni ingilazi yesibili.
Inkambo kwenziwa izinsuku eziyishumi.
Ngakho, isibindi kusulwe zonke izinhlobo amakhemikhali ayingozi kanye ubuthi, izidakamizwa (kuhlanganise antibiotic); heavy metal zikasawoti.
Ukulandela yokuhlanza usuku eziyishumi, uzizwa:
kokukuvakashela elingavamile amandla,
esitholakala komzimba kalula,
isikhumba azihlanzile kakhulu ihlanganisa umzimba (we sikhathi sonyaka kungenzeka ukuqubuka emzimbeni, okuyinto uzonyamalala ekupheleni nokushintsha kokudla nokufakwa)
luyoqina futhi ngeke usaba exfoliate izinzipho
ukuqala kangcono ukukhula izinwele,
ngcono ukuhamba ngokuhlanganyela,
abamhlophe bluish ka amehlo akhe uyothola ngiseyingane, umbala.
Kufanele kuqashelwe ukuthi usebenzisa i-sodium thiosulfate kalula ukususa utshwala ukuhoxiswa syndrome, eliletha ukuthula isimo sengqondo lapho ngaleso yotshwala udakiwe. Kuchazwe nethonya elihle zomuthi phezu sofuba engazweli emthini, futhi kungenziwa selaphe ngempumelelo isifo sokuqina kwemithambo yegazi, amanxeba purulent kanye ifomu okukhulu ukusangana (ngokuvumelana eMoscow Research Institute of sofuba). Microclysters ne-sodium thiosulfate vumela ukulwa ngempumelelo spikes, izifo fibrosis. Ngaphezu kwalokho, ngokuvumelana ezingaqinisekisiwe idatha isayensi - kungcono indlela Akumangalisi ngempumelelo ekwelapheni psoriasis.
Ungakhohlwa ukuthola usizo lodokotela abanolwazi ngaphambi kokuqala ukuthatha izidakamizwa.
"Cardiomagnyl": nokubuyekezwa imithi
"Hystoglobulin": yokusetshenziswa, intengo
I-Algae fucus: lapho ikhona khona, isicelo, isithombe
Indlela tie spokes volumetric cap? Ivolumu cap spokes: amaphetheni wesifunda
Metaplasia emathunjini isisu: izimpawu, ukwelashwa. metaplasia squamous - a ...
Amber isimangaliso - uju. Izakhiwo Iwusizo abesifazane
Eleutherococcus: yokusetshenziswa, izimpawu, contraindications, umthamo